दक्ष जनशक्ति विदेशिन रोक्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता दक्ष जनशक्ति विदेशिन रोक्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै छ
on: June 10, 2019 अन्तरवार्ता
देवेन्द्र साहू, प्रबन्धक, पञ्चकन्या स्टील्स प्रालि
पञ्चकन्या स्टील्स प्रालि पञ्चकन्या समूहअन्तर्गतको उद्योग हो । रूपन्देहीको भैरहवामा रहेको उक्त उद्योग सञ्चालनमा आएको ४६ वर्ष पूरा भएको छ । उद्योगले हाल रड र स्टील गरी दुई प्रकारका सामग्री उत्पादन गर्दै आएको छ । प्रस्तुत छ, उद्योगका प्रबन्धक देवेन्द्र साहूसँग आर्थिक अभियानका निकेश खत्रीले गरेको कुराकानीको सार :
पञ्चकन्या स्टील्सले दैनिक कति परिमाणमा स्टील उत्पादन गर्दै आएको छ ?
यसअघि पन्चकन्या स्टील्सको दैनिक उत्पादन क्षमता ४ सयदेखि ५ सय टन थियो । तर अहिले उद्योगमा आधुनिक मेशिन जडान गरेर प्रतिदिन उत्पादन क्षमता ५ सय टनदेखि ६ सय टन पुर्‍याएका छौं । उद्योगले यही वर्षमात्र आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाएको हो । उद्योगको वार्षिक क्षमता १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन हो । उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करीब ५ सय जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
उद्योगमा हालसम्म कति लगानी भएको छ ? आगामी दिनमा लगानी थप्ने योजना छ ?
उद्योग ४६ वर्ष पुरानो हो । यही वर्ष उद्योगको क्षमता बढाउन आधुनिक मेशिन जडान, विद्युतीय क्षमता विस्तार र कर्मचारी थप गर्दा रू. २५ करोड लगानी गरिएको छ । स्थापना कालदेखि उद्योगमा रू. १ सय करोडभन्दा बढी लगानी भएको छ ।
केही दिनअघि मात्र नयाँ मेशिन जडानपछि उद्योगले त्यसबाट पनि उत्पादन शुरू गरेको छ । तर पनि अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ । वातावरणलाई असर नगर्ने मेसिनहरु जडान गर्न वातावरण मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ । सोहीअनुसार हामीले अत्याधुनिक मेशिनको जडान गर्नुपर्छ । समग्रमा उद्योगले वार्षिक रूपमा २० करोड देखि २५ करोडसम्म लगानी गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा पनि सोहीअनुरूप लगानी र नयाँ प्रविधिअनुसार उद्योगको क्षमता बढाउँदै लैजानेछौं ।
उद्योगबाट के कस्ता सामग्री उत्पादन हुँदै आएको छ ?
उद्योगले स्टील र रड गरी दुई प्रकारका सामग्री उत्पादन गर्दै आएको छ । विशेषगरी ८ देखि ३२ मिलिमिटरसम्मको रड र स्टील उत्पादन गर्दै आएको छ । तर बजारको मागअनुसार ४० मिलिमिटरसम्मको सामग्री उत्पादन गर्ने क्षमता उद्योगको छ ।
देशभर यसका कति डिलर छन् ?
देशभर गरेर पन्चकन्या स्टील्सका ८० ओटाभन्दा बढी डिलर छन् । हामीले प्रदेश संरचना अनुसार नै आफ्ना डिलर स्थापना गरेका छौं, जसमा मुख्य डिलर सातै प्रदेशका मुख्य शहरमा छन् भने अन्य साना डिलर देशका विभिन्न शहरमा स्थापना गरिसकेका छौं । यस्तै नेपालगञ्ज, पोखरा र काठमाडौंमा कम्पनीले आफ्नै डिपो पनि स्थापना गरेको छ ।
उद्योगलाई आवश्यक कच्चापदार्थको आपूर्ति कसरी गर्नुहुन्छ ?
हामी भारतको स्टील अथोरिटी अफ इन्डिया कम्पनीबाट अधिकांश कच्चापदार्थ ल्याउँछौं । त्यसपछि टाटा र भारतीय सरकारअन्तर्गतको स्टील कम्पनीबाट पनि आयात गर्छौं । गतवर्ष ७० हजार मेट्रिक टन कच्चापदार्थ ल्याएका थियौं । यो वर्ष १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन कच्चापदार्थ भित्र्यायौं ।
उद्योग सञ्चालनमा के कस्ता समस्या छन् ?
उद्योगले आवश्यकता अनुुसार विद्युत् पाएको छैन । पाएको विद्युत् पनि पूर्व सूचनाविनानै प्राधिकरणले काट्दै आएको छ । यसले गर्दा उद्योगले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करोडौंको घाटा बेहोर्दै आएको छ । यसबाहेक उद्योगलाई दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । मागअनुसार दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति पाउनै मुश्किल छ । नयाँ कर्मचारीलाई काम सिकाएपछि विदेशिने गर्छन् । काम सिकाउन ठूलो लगानी गरेपछि कर्मचारी बाहिरिँदा नयाँ कर्मचारी ल्याएर शुरूदेखि काम सिकाउनुपर्छ । यसले उद्योगलाई समस्या पर्ने
बीचमा काम छाडेर विदेश जाने युवा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । यो अभाव परिपूर्ति गर्न भारतबाट जनशक्ति ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यद्यपि कतिपय कामदार उद्योग छाडेर विदेश गएपछि धोका खाएर पुनः यही कम्पनीमा काम गर्न फर्किएका उदाहरण पनि छन् । विदेशको अनुभव लिएपछि केही युवामा नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ विकसित भएको समेत पाइएको छ ।
यस्ता उद्योगबाट जनशक्ति पलायन रोक्न सरकारले के गर्नुपर्ला ?
नेपालमै रोजगारी गर्दा पनि विदेशी भूमिमा भन्दा राम्रो हुन्छ । तर मनोवैज्ञानिक रूपमा युवाहरूमा विदेश नै सब थोक भन्ने भ्रम परेको छ । यो प्रवृत्ति रोक्न सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्छ । युवालाई स्वदेशकै रोजगारीमा आकर्षित गर्ने किसिमका योजना तथा कार्यक्रम तत्काल ल्याउनुपर्छ ।
सरकारले ल्याएको पछिल्लो श्रम ऐनले उद्योगलाई कस्तो असर गरेको छ ?
सरकारले अहिले नयाँ श्रम ऐन ल्याएको छ, जसमा उद्योगले कामदारको सञ्जयकोष काट्नुपर्ने, कर्मचारीको स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यी व्यवस्था उद्योगले त्यसअघि नै गरिसकेकाले हामी ठूलो समस्यामा परेका छैनौं ।
आफ्ना कर्मचारीलाई उद्योगले कस्ता सेवासुविधा दिएको छ ?
उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीको दुर्घटना बीमा रू. ७ लाखबराबरको गरिएको छ । यस्तै बिरामी बीमा रू. १ लाखबराबरको छ । प्रत्येक महीना उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ । सबै कर्मचारीलाई उद्योगले समान व्यवहार गर्दै आएको छ । वर्षभरि राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत समेत गर्दै आएका छौं ।
यहाँका स्थानीयले उद्योग सञ्चालनका कारण प्रदूषण बढ्यो भन्ने गुनासो गरेका छन् ? वा यही कारण उद्योग सञ्चालनमा कुनै समस्या उत्पन्न भएको छ ?
आगामी दिनमा नगर्लान् भन्न सकिँदैन । तर आजसम्म कुनै पनि स्थानीय बासिन्दाले उद्योगले प्रदूषण ग¥यो भनेर विरोध गरेका छैनन् । उद्योगबाट कुनै समस्या भएमा सबै स्थानीय उद्योग परिसरमा आउँछन् र समस्या समाधानका उपाय दिन्छन् । अहिलेसम्मको स्थितिमा उद्योगले स्थानीयले दिएका प्रत्येक सुझावलाई सही रूपमा लिएर अगाडि बढ्दै आएकाले पनि कुनै प्रकारको समस्या नआएको हुन सक्छ ।